सबै प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार छ : वरिष्ठ अधिवक्ता मैनाली - Kohalpur Trends
५ फागुन, काठमाडौं । एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) का रुपमा चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले बहुमत, अल्पमत जुनसुकै माध्यमबाट निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार हुने बताएका छन् ।
जवाफमा मैनालीले अभ्यास र संविधान दुबै महत्वपूर्ण हुने बताए । विघटनको केही न केही कारण रहेको हुने उल्लेख गरे ।
उनलाई न्यायाधीश प्रधानले फेरि सोधिन्, ‘यसलाई राजनीतिक रुपमा हेर्ने कि रिट निवेदनमा लेखिए जसरी संविधानको टेस्टका रुपमा ? एमिकसले चेक एण्ड ब्यालेन्स मात्रै भन्यो । यसमा सेपरेसन अफ पावरका रुपमा कसरी हेर्न सकिन्छ ?’
जवाफमा मैनालीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ विघटनको अधिकार र प्रक्रिया दुवै भएको बताए ।
आफ्नो राय दिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले संविधानमै त्रुटि रहेको पनि जिकिर गरेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । यो व्यवस्था चुनाव भएपछि पहिलो पटकका लागि हो भन्ने राय प्रस्तुत गर्दै उनले पहिलो सरकार बनिसकेपछि अर्को सरकार आउने सन्दर्भमा संविधानमा त्रुटि रहेको बताए ।
जवाफमा मैनालीले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अवशिष्ट अधिकार दिएको बताए । ‘संविधान हेर्नै पर्दैन, संविधानको ब्याख्या कसरी गर्ने भन्ने हो’ मैनालीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई अवशिष्ट अधिकार छ ।’
जवाफमा मैनालीले पार्टी भित्रको द्वन्द्वका कारण काम गर्न नपाएको प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चलाई बुझाएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको सुनाए ।
फेरि सोधियो, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनमा किन सरोकार रहन्छ पार्टीको समस्या ?’
जवाफमा मैनालीले पार्टीले सरकार चलाउने भएका कारण पार्टीको समस्या सरकारमा पर्ने बताए । ‘हरेक दिन मिटिङ, कहिले सचिवालय बैठक, कहिले स्थायी समिति हामीले त्यो देख्यौं । यसले पार्टीभित्र द्वन्द्व रहेको देखिन्थ्यो’ उनले भने ।
जवाफमा मैनालीले संविधान बनाउँदा पनि यस विषयमा छलफल भएको बताए ।
जवाफमा मैनालीले छलफल भएको र संसदीय शासन पद्धति अवलम्बन गरिएको बताए । तर, ०४७ को जस्तो तोकेरै नलेखिएर अन्तरनिहित अधिकारका रुपमा छोडिएको बताए ।
सिन्हाले फेरि सोधे, ‘सहमति नभएको विषय पनि संविधानमा छ भन्ने हो भने यो संविधान कहाँ गएर टुङ्गिन्छ होला ?
जवाफमा मैनालीले भने, ‘जुन सिस्टम राख्यौं, त्यसमा संसद विघटनको अधिकार हुन्छ ।’ संसदीय पद्धति अपनाएका कारण विधायिकाले प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना गरेको उनको भनाइ छ ।
Previous Previous post: साबित्रा घाइते भएपछि एपीएफलाई उपाधि नै खल्लो
Next Next post: बिमान दु’र्घ’ ट ना हुनु केहि समय अघि एकै परिवारका सदस्यले खिचेको तस्बिरले संसारलाई नै रुवायो